Waa maxay sababta Kenya iyo Soomaaliya ay ku dagaalamayaan xuduudaha badda? – Walaal24 Newss
Madaxwaynaha Uhuru Kenyatta iyo Khayre ayaa kula kulmay Aqalka Madaxtooyada, Nairobi bishii Janaayo 29-keedii, halkaas oo ilo xogogaal ah ay shegeen in Ra’iisul Wasaaraha ayaa la waydiistay in uu xaraashka shidaalka xayiraad ka dhigo.
Raysul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa diiday in uu dib u dhigo ama joojiyo kulankan London kaas oo ah qodobo saliideed oo la isku haysto “la xayiray” khilaafka diblomaasiyadeed ee sii kordhaya ee Kenya: waxaana qoray Wargeyska STANDARD.
“Kenya, iyada oo loo marayo waddooyin badan, waxay raadineysay inay xal u raadiso xal nabadeed oo xuduud u leh xudduudda badda,” ayuu yiri Macharia Kamau, oo ah afhayeenka arrimaha dibadda ee dalkaasi.
Soomaliya, si kastaba ha ahaatee, ayaa xaraashka shidaal gashay 7dii Febraayo, sida ay sheegtay wasaaraddu. Qaybaha saliiddu waa L21, L22, L23 iyo L24. Waxay iibiyeen UK iyo Norway.
Safaarada Soomaaliya ee Nairobi ayaa sheegtay in aysan jirin wax xaraash ah oo shidaal lagu iibiyay.
Si kastaba ha ahaatee, Adrian Blomfield oo ah Daily Telegraph ayaa yiri, “Waxaan la hadlay saaxibkeyga oo ahaa shirkii Soomaaliya. Waxa uu sheegay in aysan jirin wax isdabajoog ah, laakiin khariidad ayaa lagu muujiyay saldhigyo shidaal iyo gaas ah oo xukuumadda Soomaaliya ay doonayso in ay xaraashto mustaqbalka, kuwaas oo qaar ka mid ah laga yaabo in ay khilaafka ka dhex oogaan Kenya. ”
Ilaha kale ee aan rabin in lagu magacaabo ayaa sheegay in kasta oo dalabkii la bilaabay, wax xaraash ah laguma sameyn.
“Nidaamka dalbashada ee Spectrum Geo ee London ma laha wax la xidhiidha dhulalka la isku haysto. Dhamaan xaafadaha waa woqooyi waana mid si cad loo garan karo, “ayuu yiri.
Dhibaatooyinka ku jira Dalalka Spectrum Geo waxay ka imanayaan shaxda ka soo baxda meelaha ay yihiin mawduucyada sahaminta laba qaybood (2D) ee sahaminta 2014 iyo 2015 waqooyiga degaanka lagu muransan yahay.
Khilaafku wuxuu ku jiraa maxkamada caalamiga ah. “Waxa kaliya ee la iibiyay 7-dii Febraayo waa xogtaas oo ah faa’iidada shirkadaha shidaalka iyo gaasta,” ayaa lagu yiri warbixinta.
Aqoonyahan ku xeel dheer xaduudaha ayaa sheegay inta badan Dowlada Kenya waxa ay ku doodeyso aan xaqiiqda ku fadhinin, hadii dowlada Kenya ay xaqiiq heyso waxay sugi laheyd go’aanka Maxkamada Caalamiga ah.
Xukuumadda Kenya ayaa dalbatay in Soomaaliya ay ka noqoto khariidad khalad ah oo ay soo saartay xilligii la xayiray ee dalxiiska ee saliidda iyo gaaska ee dhulka Kenya.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa isha ku hayaa xaraashka, waxaana uu xiiseynayay Soma Gas iyo Oil, halkaas oo uu ahaa agaasimaha fulinta ee Africa ilaa uu ka tagay 2017.
Soma Gas iyo Oil waa shirkad saliideed oo khaas ah oo baadha khayraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya. Waxay ka diiwaan gashan tahay London. Sannadkii 2013, waxay saxiixday heshiis qandaraasle ah oo ay Soomaaliya la gashay xukuumadda si ay u ururiso xog ku saabsan saliidda badda iyo badda. Is-beddelka, shirkaddu waxay xaq u leedahay inay codsato ilaa 12 shay oo saliid ah.
Boqortooyada Ingiriiska, Norway, Turkiga, Qatar iyo Dowladdo kale ayaa si aamus ah u dagaalamaya in ay saameyn ku yeeshaan biyaha saliidda badan ee Soomaaliya, falanqeeyayaasha ayaa ka digay in ay carqaladeeyn karaan dib u soo kabashada dalka ka dib tobanaan sano oo dagaal.
Guddi ka tirsan QM ee khabiirada warbixinta ee July 2013 ayaa ka digay in saliida ay keeni karto khilaafka u dhaxeeya Dowladaha iska soo horjeeda.
Laakiin wasiirkii hore ee wasaaradda khayraadka dabiiciga ah Cabdirisaaq Maxamed ayaa ku jawaabay Sabtidii: “Tani waxba kuma laha shirwaynaha Soomaaliya ee lagu qabanayo London. Waa istaraatijiyad horudhac ah oo lagu xoojinayo Dawladda Soomaaliyeed si loo furo wadahadal ku saabsan khilaafka badda ee Kenya ama saamayn ku leh natiijada kiiska ka hor Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaalada. ”
Macharia Kamau ayaa beeniyay in tallaabadani ay ahayd in ay Soomaaliya xakamayso si ay uga wada xaajoodaan. “Waa Soomaaliya oo nagu qaadatay ICJ. Kiisku wali wuu joogaa. Si kastaba ha ahaatee, ma aad saaxiibkaaga u qaadataa maxkamad? Way fiican tahay in laga wada hadlo, “ayuu yiri Kamau.
“Tani ma aha arrin si fudud loo qaado. Waxaan taariikh u haynaa Soomaaliya. Ma dooneyno wax isa soo taraya sababtoo ah waxaan horeyba ula tacaalnay saameynta deris aan xasillooneyn, “ANC Musalia Mudavadi ayaa shalay yiri. “Aan la socono xukuumadda Kenya.”
Xukunka 2-da Febraayo, 2017, ICJ ayaa go’aansatay in ay go’aamiso khilaafka badda ka dib markii wadahadaladii dhex maray Kenya iyo Soomaaliya ay ku fashilmeen. Kenya waxay rabtaa in khilaafka lagu xalliyo wadahadal. Qareennada ayaa sheegay in xuduudda badda ay la siman tahay isla markaana la mid ah sida lagu sheegay Qorshihii Madaxtooyada ee 1979-kii.
Soomaaliya ayaa sheegaysa in xudduuddu ay tahay in ay noqoto xarun siman iyo in hawlaha sahaminta shidaalka Kenya ee degaanka lagu muransan yahay ay sharci darro tahay.
Bishii Febraayo 2017, Kenya waxa ay lumisay wareeggii koowaad ee kiiskii loo qabtay Soomaaliya si ay uga joojiso arrinka in ay socoto dhageysi buuxda. Maxkamaddu wali maaha inay bixiso taariikhda dhageysiga.
Kenya ayaa daneyn weyn ku leh Soomaaliya iyada oo ciidanka KDF ay wali joogaan dalka. Kenya ayaa gacan ka geysatay dhismaha Jubaland ka dib markii ay si wadajir ah ula wareegtay caasimadeeda, magaalada Kismaayo ee al-Shabaab 2012-kii.
Madaxweyne Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya oo u ambabaxay dalka Burundi
Shir looga hadlayo Horumarinta Galmudug oo ka furmay Dhuusamareeb
Maamulka Jubbaland oo dib ugu celiyay Magaalada Muqdisho Saraakiil ka tirsan NISA